Edere site Tranquillus | Jan 25, 2020 | Office
N'ihi ọtụtụ ihe dị iche iche, ndị otu azụmahịa nwere ike ịchọrọ imekota oke. Iji maa atụ, enwere ike nwe ndị na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ nwee ike mechie ụlọ na-esochi ọrụ ọgbụgba. Iji mee ka ndị ọrụ wee nwee ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ ha otu oge wee na-ekwurita ibe ha okwu, iji ngwa nkwukọrịta dịka Slack dị mkpa.
Gịnị bụ Slack?
Slack bụ usoro ntanetị na-ahapụ ha imekorita nkwukọrịta n'etiti ndị otu ụlọ ọrụ. Ọ na-egosi onwe ya dị ka mgbanwe ọzọ na-agbanwe agbanwe na ntanetị ozi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Agbanyeghị na ezughi oke ma nwee ike ịkatọ ya, ọ na - adọta ụlọ ọrụ na - emewanyewanye.
Slack na-eme ka o kwe omume ikwusa ozi na ozugbo, na nke a, n'ụzọ dị mfe ma e jiri ya tụnyere ozi ịntanetị. Sistemụ ozi ya na-enye gị ohere izipu ma ozi izugbe ma nke onwe. Ọ na-enyekwa ọtụtụ ohere dịka ịkekọrịta faịlụ (ederede, onyonyo, vidiyo, wdg) na vidiyo ma ọ bụ nkwukọrịta okwu.
Iji jiri ya, banye na ikpo okwu wee mepụta akaụntụ. Ị ga-enwezi ohere ịnweta ụdị Slack n'efu nke na-enyelarị ọtụtụ atụmatụ. Ị nwere ike izipu oku site na email nye ndị otu ịchọrọ ịgbakwunye na otu ọrụ gị.
Ikpo okwu nwere ezi echiche. Iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma, mana, ụzọ ole na ole dị ole ga-adị mkpa ị ga-echeta, mana ha anaghị esiri ha ike. Na mgbakwunye, enwere ike iji kọmputa, Smartphone ma ọ bụ mbadamba rụọ ọrụ na Slack.
GỤỌ Microsoft PowerPoint: ghọta uru ọ bara na arụmọrụ ya.
Gwa Slack ozi
N'ime ebe ọrụ ọ bụla ụlọ ọrụ dakọtara n’elu ikpo okwu, ọ ga-ekwe omume ịmepụta mpaghara mgbanwe akọwapụtara nke akpọrọ "eriri". A ga-ekenye ha ihe omume ndị a ka ewee hazie ha dịka ọrụ ụlọ ọrụ si dị. Ya mere enwere ike ịmepụta yinye maka ihe ndekọ ego, ahịa, wdg.
Ọ dịkwa ike ịmepụta yinye ga-eme ka ndị otu zụọ ahịa, ma ọ bụ ọkachamara ma ọ bụ na ọ bụghị. Yabụ na ọgba aghara adịghị, onye ọ bụla so na ya ga-enwe oghere ga na-arụkọ ọrụ ya. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ese ihe eserese nwere ike ịbanye na ahịa ma ọ bụ n'ahịa ahịa dabere n'otú azụmaahịa si arụ ọrụ.
Ndị chọrọ ịnweta ọwa ga-ebu ụzọ nata ikike. Onye obula n’otu n’otu nwekwara ike imeputa udiri ihe. Agbanyeghị, iji gbochie mkparịta ụka ị ga-enwe mgbagwoju anya, ọ ga-ekwe omume iwepụ atụmatụ a.
Channelszọ dị iche iche maka ikwurịta okwu na Slack.
Enwere ike idozi nkwukọrịta na ụzọ 3. Nke mbụ bụ usoro zuru ụwa ọnụ nke na-enye ohere iji ziga ndị niile nọ n'ụlọ ọrụ ahụ ozi. Nke abụọ bụ izipu naanị ndị otu nke otu eriri. Nke ato bu iziga ozi nkeonwe, site n’otu n’ime ya rue onye ozo.
Ka izipu ozi, enwere ụzọ mkpirisi ụzọ ịma. Dịka ọmụmaatụ, iji mee ka onye pụrụ iche nọ na yinye, ị ga-ederịrị @ nke a na-esote aha onye ị na - achọ. Iji mee ka ndị niile mara n'otu olu pụta, enwere iwu @ nom-de-la-chaine.
GỤỌ Kedu ka esi emepụta ụzọ mkpirisi keyboard na Windows 10?
Iji mee ka kọleji maka ọkwa gị (enweghị ya, arụ ọrụ, wdg), enwere iwu "/ ọnọdụ". Iwu ndị ọzọ na-atọ ụtọ dị ugbu a, dịka nkata "/ giphy" nke na-enye gị ohere izipu GIF nkata. Ọ ga - ekwe omume ịhazi emojis gị ma ọ bụ mepụta robot (Slackbot) nke na - aza oku na - akpaghị aka n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ.
Uru na ọghọm nke Slack
Slack na-enye ọtụtụ uru site na belata ọnụ ọgụgụ nke ozi-e esịtidem nke ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, a na-edebe ozi ndị a gbanwere ma ga-achọpụta ngwa ngwa site na nchọta ọchụchọ. Morefọdụ nhọrọ bara uru ma ọ bụ nke na-erughị uru dịkwa na ihe atụ #hashtag nke na-enye gị ohere ịchọta azịza ọ bụla.
Enwere ike mepee ya na ama, ọ na-enye gị ohere na-arụ ọrụ site na ebe ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ na-enye ohere nke ịgụnye ọtụtụ ngwaọrụ dị ka Dropbox, Skype, GitHub ... Ihe mgbakwunye a na-enye gị ohere ịnweta ọkwa site na nyiwe ndị a. Slack na-enye API nke na-enye ụlọ ọrụ ọ bụla ohere ịmekọrịta mmekọrịta ya na ikpo okwu.
N'ihe banyere nchekwa, ikpo okwu na-ahụ na data nke ndị ọrụ ya emebighị. Yabụ ebe ahụ encrypts data n'oge nnyefe ha na n'oge nchekwa ha. Sistemụ nyocha na-emeziwanye, ma na-amachi ihe ọghọm ị na-egbochi ha dị ka o kwere mee. Obu ya mere ikpo okwu ebe eji akwanyere izu nzuzo nke nkwukọrịta.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị Slack yiri ka ọ nwere ọtụtụ uru, ọ nwere ike ọ gaghị amasị onye ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mfe karịa iwepu ozi na ọkwa na ikpo okwu. Ọzọkwa, e mere ya na mmụọ nsọ ka nke ụmụaka ịmalite. Companieslọ ọrụ ọdịnala ga-eme ka usoro ọrụ ọ na-eweta ghara iduhie kpamkpam.
Slack: Okwu Mmalite na Ngosi # 1
Slack: Jiri ntuli aka # 12
Soro otu na-emekọ ihe na obere ime ụlọ na Slack Mee 17th, 2020Tranquillus
gara agaSoro TeamViewer na-arụ ọrụ n’oge na-arụ ọrụ
-esonụOfdị ezumike dị iche iche, kedu mgbe ọ ga-eji mee ya?